Foreign Investment Law Myanmar Version
The new Myanmar Foreign Investment Law was officially published by State newspapers Myanmar Ahlin and Kyae Mon on Saturday Nov. 3, 2012. If you can read Myanmar, here’s the official Myanmar Language version of the Myanmar Foreign Investment Law 2012:
Click here if you’re having trouble reading the Myanmar text (i.e. you only seeabunch of boxes)
(၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၁။)
၁၃၇၄ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၃ရက်
(၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဆိုသည်။
( ခ ) ကော်မရှင်ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဃ) နိုင်ငံသား ဆိုရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူလည်းပါဝင်သည်။ ဤဥပဒေအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံသားများ ဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။
( င ) နိုင်ငံခြားသား ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူကိုဆိုသည်။ ဤဥပဒေအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။
( စ ) ကမကထပြုသူ ဆိုသည်မှာ ကော်မရှင်သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍အဆိုပြုသည့် နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးကို ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေဆိုသည်။
(ဆ) အဆိုပြုချက် ဆိုသည်မှာ ကမကထပြုသူက ရည်ရွယ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့တင်သွင်းသော သတ်မှတ်သည့် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပဋိညာဉ်စာချုပ်မူကြမ်း၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအထောက်အထားများကို ဆိုသည်။
( ဇ ) ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ သဘောတူခွင်ြ့ပုချက်ကို ဖော်ပြသည့်အမိန့်ကို ဆိုသည်။
( ဈ ) နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း ဆိုရာတွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဦးက ခွင့်ပြုမိန့်အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
(၂) စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများအပါအဝင် လုပ်ငန်းတွင်အမှန်တကယ် သုံးစွဲရန်လိုအပ်၍ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ မရရှိနိုင်သောပစ္စည်း၊
(၃) လိုင်စင်၊ တီထွင်မှုပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့်စသည့် အသိÓဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်သောအခွင့်အရေး၊
(၅) အထက်ပါတို့မှ လုပ်ငန်းတွင် တိုးပွားရရှိပြီး၍ဖြစ်စေ၊ ဝေစုအကျိုးအမြတ်ကိုဖြစ်စေ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောငွေများ။
(ည) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။
( ဋ ) ဘဏ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုသော နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
( ဌ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏နယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်-
(၁) ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့် အခြားပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပေါင်ခံခွင့်နှင့်ပေါင်နှံခွင့်များ။
(၂) ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာများ၊ စတော့(ခ်)များနှင့် ဒီဘင်ချာခေါ်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊
(၃) ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အဖြစ်ထားရှိသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ငွေကြေးအခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
(၄) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အသိÓဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊
(၅) သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရပေးအပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ။
( ဍ ) မြေငှားရမ်း ခငွ ရ့် ရသှိူသမို့ ဟတ်ုမြေအသုံး ပြုခငွ ရ့် ရသှိူဆသို ညမ်ှာ နငို င်ေံ တ်ာက သတ်မှတ်ထားသည့် မြေငှားခကို နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်၍သတ်မှတ်ထားသော ကာလအပိုင်းအခြားအထိ မြေငှားရမ်းခွင့်ရရှိသူသို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ရရှိသူကို ဆိုသည်။
၃။ ဤဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့်ကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။
၄။ အောက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ကန့်သတ်သည့် သို့မဟုတ် တားမြစ်သည့် လုပ်ငန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်-
(က) နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိခိုက်စေသောလုပ်ငန်းများ၊
( ခ ) ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊
( ဂ ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊
(ဃ) နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊
( င ) နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များအရ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းများ၊
( စ ) နည်းဥပဒေထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊
(ဆ) ပြည်ပမှစမ်းသပ်ဆဲဖြစ်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် အတည်ပြုချက်မရရှိသေးသောနည်းပညာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့် သယ်ဆောင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊
( ဇ ) နည်းဥပဒေထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် နှစ်တိုနှစ်ရှည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊
( ဈ ) နည်းဥပဒေထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊
(ည) နည်းဥပဒေထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၊
( ဋ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများမှအပ နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်နှင့် အခြားနိုင်ငံများနယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်မျဉ်းမှ တစ်ဆယ်မိုင်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ။
၅။ ပုဒ်မ ၄ အရ ကန့်သတ်သည့် သို့မဟုတ် တားမြစ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသား အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ
၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ကိုရယူ၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၆။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေ၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကြီးမားစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကြီးများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
၇။ နိုင်ငံတော်၏ြွကယ်ဝသော သယံဇာတပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ်၍ ပြည်သူများလောက်ငစွာသုံးစွဲခံစားနိုင်ကြရန်နှင့် ပိုလျှံလာသည်တို့ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်စေရန်၊ လုပ်ငန်းများတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူတို့အတွက်လည်းအလုပ်အကိုင်များ ပေါ်ပေါက်ပေါများလာစေရန်၊ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်၊အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သောဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်မြင့်လမ်းမကြီးများ၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ထားသည့် အဝေးပြေးလမ်းများ၊အမျိုးသားလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ခေတ်မီသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအပါအဝင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးစေရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၊နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရထား၊သင်္ဘော၊လေယာဉ်စသည့် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင်ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီး နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံသားများနိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အောက်ပါမူများကို အခြေခံပြီး ခွင့်ပြုရမည်-
(က) အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များ၊နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများက မဆောင်ရွက်နိုင်သေးသော ငွေကြေးအင်အားနှင့် နည်းပညာမပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုရေး၊
( ခ ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်ရေး၊
( ဂ ) ပြည်ပပို့ကုန်တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ရေး၊
( င ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာ လိုအပ်သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရေး၊
( စ ) အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာရပ်များ တိုးတက်ရရှိရေးနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊
(ဆ) မတည်ငွေရင်းကြီးမားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုရေး၊
( ဇ ) စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာစေမည့် လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရေး၊
( ဈ ) ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
(ည) စွမ်းအင်သစ်များ ရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဇီဝအခြေခံစွမ်းအင်သစ်များကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ပေါ်ပေါက်ရေး၊
( ဋ ) ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
( ဌ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊
( ဍ ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာရယူဖလှယ်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရေး၊
( ဎ ) နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပြည်သူများ၏လုံခြုံမှု မထိခိုက်စေရေး၊
(ဏ) နိုင်ငံသားများအသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
(တ) နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဘဏ်နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
(ထ) နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွက် လိုအပ်သော ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး၊
( ဒ ) နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတများကို ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှု ရေတို၊ရေရှည် ဖူလုံစေရေး။
၉။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အောက်ပါပုံစံတစ်ခုခုဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) ကော်မရှင်ကခွင့်ပြုသော လုပ်ငန်းများ၌ နိုင်ငံခြားသားက နိုင်ငံခြား မတည်ငွေရင်း ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊
( ခ ) နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့ ဖက်စပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊
( ဂ ) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူသော ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စနစ်တစ်ခုခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁ဝ။ (က) ပုဒ်မ ၉ အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံဖွဲ့စည်းရာတွင်-
(၁) တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(၂) ပုဒ်မ ၉ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပါက နိုင်ငံခြားမတည်ငွေနှင့် နိုင်ငံသားမတည်ငွေ အချို့ကို ဖက်စပ်လုပ်ငန်းပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်အရ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၃) နိုင်ငံခြားသားက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည့်ပမာဏကို ကော်မရှင်က လုပ်ငန်းသဘာဝအပေါ်မူတည်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူ သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(၄) နိုင်ငံခြားသားသည် တားမြစ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ကန့်သတ်သည့်လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံသားနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ပါက နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းအချိုးကို နည်းဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချိုးအတိုင်း အဆိုပြုနိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ လုပ်ငန်းရပ်စဲခွင့်ရရှိ၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်-
(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၊ သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်စေလျက်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(၂) ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကိုသတ်မှတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
( ခ ) နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုသော လစာ၊ စရိတ်နှင့်ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၂။ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်များကို စိစစ်ရာတွင် အဆိုပြုချက်သည် ဤဥပဒေ အခန်း(၄)ပါ အခြေခံမူများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ ငွေရေးကြေးရေးယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လုပ်ငန်း၏စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု၊ စက်မှုနည်းပညာဆီလျော်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုစသည့် အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ခြင်း၊
( ခ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ဥပဒေအရခံစားခွင့်ရှိသော အခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝမရရှိကြောင်း တိုင်ကြားလျှင် လိုအပ်သလို အမြန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဂ ) အဆိုပြုချက်များကို တည်ဆဲဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
(ဃ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ခြောက်လတစ်ကြိမ် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
( င ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူစေရန်လည်းကောင်း၊ အားပေးအထောက်အကူပြုရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
( စ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးပမာဏနှင့် လုပ်ငန်းသက်တမ်းတို့ကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဇ ) အသုံးပြုခွင့်ရရှိသောမြေ၏ မြေပေါ်မြေအောက်၌ ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ မူလစာချုပ်တွင်မပါဝင်သော သဘာဝသယံဇာတ ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ တွေ့ရှိလျှင် ကော်မရှင်ကချက်ချင်းသိရှိရန်နှင့် အရေးယူနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဈ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား ဤဥပဒေ၊ ဤဥပဒေအရပြုလုပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကလိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိသော လုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း၊
(ည) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်ပေးရန်မလိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
( ဋ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။
၁၃။ ကော်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) နိုင်ငံတော်၏အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ဟု ယူဆပြီး တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်လည်း မဆန့်ကျင်သည့်အဆိုပြုချက်ကို လိုအပ်သောစိစစ်မှုများပြုလုပ်၍ လက်ခံခြင်း၊
( ခ ) အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံလျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကမကထပြုသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ထုတ်ပေးခြင်း၊
( ဂ ) ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာတို့က လျှောက်ထားလာလျှင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဃ) ကမကထပြုသူထံမှ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထံမှလည်းကောင်းလိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကိုဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ တင်ပြရန်တောင်းဆိုခြင်း၊
( င ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကအဆိုပြုချက် ယင်အထားများ သို့မဟဆောင်ရွက်ခြင်းမပေါ်ပေါက်လျှင်တစ်စုံတစ်ရာ ချမှ
( စ ) ငွေရေးကြေးရေးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကငြင်းပယ်ခြင်း။
၁၄။ ကော်မရှင်သည် မိမိ၏လနှင့် အဖွဲ့ငယ်များကို လိုအပ်သလ
၁၅။ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်
၁၆။ ကော်မရှင်ကခွင့်ပြုသောအခြေအနေများကို သုံးလတစ်ကြရင်းနှီးမြှုပ်နှ
၁၇။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ တာဝ
( ခ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသပြီး လုပ်ငန်းဆော
( ဂ ) ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခွင့်ပြုမိန့်တို့ပါ စည
(ဃ) မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့ထားသော စည်းကပြုခြင်း၊
( င ) ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကို လုပ်ငန်းသက်အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တရှယ်ယာ လွှဲပြောခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသ
( စ ) မိမိငှားရမ်းခွင့် သိုသွင်ပြင် သို့မဟုတပြောင်းလဲမှုကို ကေ
(ဆ) မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်သယံဇာတတွင်းထသိုက်ကိုဖြစ်စေ ကော်မရှင်က ခွဆက်လက်လုပ်ကိုနေရာတစ်ခုအားခြင်း၊
( ဇ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ကျင်ညစ်ညမ်းမှု ပ
( ဈ ) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြဦးဦး သို့မဟုတ် နိုကော်မရှင်၏ကြိုတတည်ဆဲဥပဒေမျာ
(ည) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြသို့မဟုတ် နိုင်ငံကော်မရှင်၏ ကြိများနှင့်အညီ အစ
( ဋ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသကျွမ်းကျင်မှုနည်းပအဖွဲ့အစည်းများအဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အခွင့်
(က) ကော်မရှင်၏ သလဲလှယ်ခြင်း သို့ဥပဒေများနှင့်အည
( ခ ) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုရောင်းချခြင်း၊
( ဂ ) မူလအဆိုပြုချက်ပနိုင်ငံခြား မတည်၍ လုပ်ကိုင်ဆော
(ဃ) တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အဝရရှိနိုင်ရန် ပြန်သို့ တင်ပြခြင်း၊
( င ) တညဆ် ဥဲ ပဒေနငှ နစ်နာချက်များနှင်ကော်မရှင်သို့ တ
( စ ) ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပညာသစ်များ တီစွမ်းအားမြှင့်တင်အကျိုးခံစားခွင့်မျ
(ဆ) နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်မှု နည်းပါးပြီး ဆရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပြည်ထောင်စုအစိုကင်းလွတ်ခွင့်ကာပေးသည်ကို ခံစာ
၁၉။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ကမကထပြုသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အဆိုပြုချက် တင်သွင်းရမည်။
(က) ပုဒ်မ ၁၉ အရ တင်သွင်းသော အဆိုပြုချက်ကို ရရှိပါက လိုအပ်သောစိစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီး ၁၅ ရက်အတွင်း အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံခြင်းသို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
( ခ ) အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံပါက အဆိုပြုချက်တင်သွင်းသူအား ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ် ခွင့်မပြုခြင်းကို ရက်ပေါင်း ၉ဝ အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၂၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ကမကထပြုသူသည် ကော်မရှင်က ထုတ်ပေးသောခွင့်ပြုမိန့်ကိုရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းနှင့် လိုအပ်သောပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တည်ထောင်ရမည်။
၂၂။ ကော်မရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာတို့က လျှောက်ထားလာလျှင် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါသက်တမ်း သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ သင့်လျော်သလို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်စေ၊ လျှော့ပေါ့ရန်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၂၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့်အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် သတ်မှတ်သော အာမခံအမျိုးအစားများကို ထားရှိရမည်။
(က) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်မှ ပထမနှစ်နှစ်အတွင်း၌ နိုင်ငံသားအနည်းဆုံး
၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယနှစ်နှစ်အတွင်း၌ အနည်းဆုံး ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊တတိယနှစ်နှစ်အတွင်း၌ အနည်းဆုံး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထားပြီး ဖြစ်ရမည်။သို့ရာတွင် အသိပညာကိုအခြေခံသော လုပ်ငန်းများအတွက် ကော်မရှင်ကသင့်လျော်သော အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကို တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ခန့်ထားနိုင်ရန် နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းတို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
( ဂ ) ကျွမ်းကျင်မှုမလိုသော လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားများကိုသာခန့်ထားရမည်။
(ဃ) အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်းကို အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးမှ လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်းကောင်း၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အစီအစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
( င ) နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူအလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ခန့်ထားရမည်။
( စ ) ပညာရှင်အဆင့်အချိုးကျခွဲဝေမှုအဖြစ် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများနည်းတူမြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားရာတွင် လုပ်ခအဆင့်ကို ခွဲခြားမှုမရှိစေရန် အခွင့်အရေးများစီမံဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၂၅။ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများသည် နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးသော အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်၊ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိရေးအတွက် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
(က) အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများကိုခန့်ထားရာ၌ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီချုပ်ဆိုရမည်။
( ခ ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကိုလည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက် အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာကြေး၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေး၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြားအာမခံထားရှိခြင်းတို့ အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများပါ အခွင့်အရေးများရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
( ဂ ) အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား၊အလုပ်သမားနှင့် အတတ်ပညာရှင်သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို့အကြားပေါ်ပေါက်လာသည့် အငြင်းပွားမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းရမည်။
၂၇။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးအထောက်အကူပြုရန်အလို့ငှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား အောက်ပါအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်များအနက် ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ကို ခွင့်ပြုရမည်။ ထို့ပြင် ကျန်ရှိသော အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ ခံစားခွင့်ပြုရန် တင်ပြလျှောက်ထားလာလျှင် ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုခုစီးပွားဖြစ် စတင်သောနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ငါးနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိလျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်လုပ်ငန်း၏
အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သော ကာလအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
( ခ ) လုပ်ငန်းမှရရှိသည့်အမြတ်ငွေကို ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်ထိုအမြတ်ငွေအပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
( ဂ ) ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန်ကိစ္စအလို့ငှာ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခြားမတည်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျှော့တွက်နှုန်းများအတိုင်းတွက်ချက်ပြီး ပစ္စည်းတန်ဖိုး လျှော့တွက်ငွေကို အမြတ်ငွေထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုက ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျှင် ထိုသို့ တင်ပို့ရောင်းချ၍ ရရှိသော အမြတ်ငွေ အပေါ်တွင်
၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်၊
( င) နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဝင်ငွေအပေါ်တွင် ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားများပေးဆောင်သည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခွင့်၊
( စ ) နိုင်ငံတော်အတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊
(ဆ) လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ခံစားပြီး တစ်ဆက်တည်း နှစ်နှစ်အတွင်း အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်သည့် အရှုံးငွေကို ယင်းသို့ အရှုံးပေါ်ပေါက်သည့်နှစ်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလအထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်၊
( ဇ ) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြားပြည်တွင်းအခွန်အကောက်များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ်သက်သာခွင့်၊
(ဈ) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှု ပြီးစီး၍ ပထမသုံးနှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြားပြည်တွင်းအခွန်အကောက်များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
(ည) ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြှင့်ပြီး မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းအား ခွင့်ပြုထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါက ယင်းသို့တိုးချဲ့သည့်လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းသောစက်ပစ္စည်းများ စက်ကိရိယာများ၊အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြားပြည်တွင်းအခွန်အကောက်များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
( ဋ ) ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
၂၈။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါသက်တမ်း သို့မဟုတ် ယင်းသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးလျှင် ယင်းသို့တိုးမြှင့်ပေးသည့် သက်တမ်းအတွင်း နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုဟု အာမခံသည်။
၂၉။ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်အရဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုအား ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ လုံလောက်သောအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အာမခံသည်။
၃ဝ။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ယင်း၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာ၌ ထည့်ဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားဖြင့် ထုတ်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အာမခံသည်။
၃၁။ ကော်မရှင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား အမှန်လိုအပ်သည့် မြေငှားရမ်းခွင့်ကာလသို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ကာလကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ကနဦး နှစ် ၅ဝအထိခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၃၂။ ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၃၁ အရခွင့်ပြုထားသော သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်းတိုးခွင့် ၁ဝ နှစ်နှင့်် ယင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ထပ်မံ၍ ၁ဝ နှစ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
၃၃။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ မြေငှားရမ်းခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ရသူထံမှ ကနဦးသဘောတူညီချက်ရယူပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ယင်းမြေပေါ်တွင် ရင်းနှီး
၃၄။ ကော်မရှင်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပိုင် မြေငှားရမ်းခနှုန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
၃၅။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံသားများလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသည့် မြေယာများ၌စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် ဖက်စပ်စနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၃၆။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးပြီး ဆက်သွယ်သွားလာရေးခက်ခဲသောဒေသများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဤဥပဒေပါ မြေငှားရမ်းခွင့်ကာလ သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်
ကာလထက်ပိုမို၍ ခံစားခွင့်ရရှိစေရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၃၇။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းကို ဘဏ်ကလက်ခံခွင့်ပြု ဆောင်ရွက်ပေးသည့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး အမျိုးအစားအတိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အမည်ဖြင့်မှတ်ပုံ
တင်ရမည်။ ထိုသို့ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း အမျိုးအစားများကို ဖော်ပြရမည်။
၃၈။ လုပ်ငန်းကို ရပ်စဲလျှင် ကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောနိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းကို သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းယူဆောင်လာသူက ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
၃၉။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် အောက်ပါငွေများကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားငွေဖြင့် သတ်မှတ်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်-
(က) နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း ယူဆောင်လာသူ ရသင့်သည့်နိုင်ငံခြားငွေ၊
( ခ ) နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း ယူဆောင်လာသူအား ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံခြားငေ
( ဂ ) နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း ယူဆောင်လာသူရရှိသည့် နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေမှအခွန်အရပ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံငွေများနုတ်ပြီးနောက် ကျန်ရှိ
(ဃ) နိုင်ငံခြားသားအမှုထမ်းများက နိုင်ငံတော်တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်၍ရရှိသော လစာငွေနှင့်လုပ်ငန်းမှ တရားဝင်ရရှိငွေတို့မှပေးဆောင်ရန်ရှိသော အခွန်အကောက်များကိုပေးဆောင်စေပြီး ၄င်းနှင့်၎င်း၏မိသားစုနေထိုင်စားသောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း နုတ်ပယ်၍ တရားဝင်ကျန်ရှိငွေ။
(က) သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် သတ်မှတ်သည့်ငွေလဲလှယ်နှုန်းအတိုင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ်တစ်ခုခုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသောဘဏ်ကလက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းကို လည်းကောင်း၊ ကျပ်ငွေစာရင်းကိုလည်းကောင်းဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၁။ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင် အမှုထမ်းသော နိုင်ငံခြားသားများသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ယင်းဘဏ်က လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံ
ခြားငွေအမျိုးအစားဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းကို လည်းကောင်း၊ ကျပ်ငွေစာရင်းကိုလည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၂။ ကော်မရှင်သည် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုမိန့်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ပြစ်ဒဏ်များကိုဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်-
(ခ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဂ) ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(ဃ) နောင်တွင်မည်သည့်ခွင့်ပြုမိန့်မျှ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်သော နာမည်ပျက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြင်း။
၄၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ပါက-
(က) အငြင်းပွားသူ ပုဂ္ဂိုလ်များအကြား ပေါ်ပေါက်လာသည့် အငြင်းပွားမှုကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖြေရှင်း၍ ပြေလည်မှုမရရှိပါက-
(၁) သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိလျှင် နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(၂) သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိလျှင် ယင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၄။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွက် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန်ထုတ်လုပ်ပြီးမှ ပိုလျှံသည်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သတ္တုစသည့် မတည်ငွေရင်းကြီးမား
သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်စေလျက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေကို အပြည့်အဝသုံးစွဲ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ကွက်၌ သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိ မရှိ လေ့လာခြင်း၊စမ်းသပ်ရှာဖွေခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့်တူးဖော်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဥပဒေနှင့်အညီ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားသော အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့အကြားထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခံစားခြင်း သို့မဟုတ် ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်အပေါ် အချိုးကျခွဲဝေခံစားခြင်းစနစ်တို့ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုတင်ပြလာလျှင် စိစစ်၍ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ထိုရင်းနှီးမှုလုပ်ငန်းသည် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါက အကျိုးအမြတ်ကာမိစေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဥပဒေနှင့်အညီ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားသော အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့အကြားအချိုးကျ၊ အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။၄၅။ ဤဥပဒေကိုမပြဋ္ဌာန်းမီက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈)အရရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
၄၆။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကော်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ပြုစုတင်ပြသော အဆိုပြုချက်နှင့်အတူ ပူးတွဲပါစာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ ငွေရေးကြေးရေးအလုပ်သမားခန့်ထားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ စသည်တို့ကို တမင်မမှန်မကန်ဖော်ပြကြောင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ကြောင်းခိုင်လုံသော သက်သေခံအထောက်အထားများ ပေါ်ပေါက်လျှင် ပြစ်မှုကြောင်းအရအရေးယူခြင်းခံရမည်။
၄၇။ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၈။ ကော်မရှင်သည် အစည်းအဝေးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၄၉။ ဤဥပဒေကအပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ကော်မရှင်ကချမှတ်သော အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်သည်။
၅ဝ။ ဤဥပဒေအရအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်၏ အဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရ။
၅၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည်ကော်မရှင်၏-
(က) ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။
၅၂။ ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းမည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈)အရ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေရမည်။
၅၃။ ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၃ နှင့် ပုဒ်မ ၅ တို့အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုရာတွင် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် အနီးကပ်ဆုံးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၄။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်က အတည်ပြုလက်ခံထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်။
၅၅။ ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြုနိုင်သေးမီကာလအတွင်း ဤဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈)အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သောနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၅၆။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဤဥပဒေအတည်ဖြစ်သောနေ့မှ ရက်ပေါင်း၉ဝ အတွင်း ထုတ်ပြန်ရမည်။(ခ) ကော်မရှင်သည် လိုအပ်သော အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၅၇။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈)ကို ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
The Foreign Investment Law – Old May Be Better
While many foreign investors anxiously await Myanmar’s new Foreign Investment Law, the question has to be asked – what’s wrong with the old one? In fact we think the older law probably offers more benefits than anything we’ve seen recently. Here are some of the incentives offered under the current (1988) law.
Benefits of Investing under the Foreign Investment Law (1988)
1.) An initial tax holiday of three years from the date the company commences operations.
2.) Exemption from import taxes on raw materials that the company uses in production for the first three years of the company’s existence.
3.) Research and development costs incurred in Myanmar are not taxed.
4.) Income tax for foreign staff is assessed at the same rate as local staff and is deductible from the company’s taxes.
5.) 50% of the profits gained from exporting goods manufactured in Myanmar are not taxed.
6.) If profits from the company are kept inareserve fund and then reinvested, these profits are not taxed.
7.) The company can carry forward any losses sustained.
While we understand the reasoning behind craftinganew law under the democratic process, will the new law offer as many benefits as the current law? The jury is still out.